हराउदैछन् बालक्लवहरू ! - Nigranitimes
होमपेज / मुख्य खबर / हराउदैछन् बालक्लवहरू !
हराउदैछन् बालक्लवहरू !
सोमबार, जेठ ३०, २०७९ , निगरानी टाइम्स
“ कुनै एक समय थियो हरेक टोल टोल, वडा वडा र जिल्ला स्तरीय संजाल देखि राष्ट्रिय मंचसम्म बालक्लवको लहर । आज ती बालक्लबहरू कता हराए ? किन हराए ? कसैको नजरमा छन् त ? ”
बालबालिकाले आफ्नो व्यक्त्तित्व विकास गर्न तथा आफ्नो हकअधिकारको लिनका निम्ति स्थापना गरिएका बालक्लवहरू बालबालिका तथा बाल अधिकारको क्षेत्रमा कृयाशिल सबैमा समर्पित छ । वि सं २०४८ सालदेखि २०७९ सालको अवधिलाई नियाल्दा बालक्लवहरूले ३ दशकको यात्रा तय गरिसकेका छन् ।
बालक्लवको पृष्ठभूमिलाई पैलाउने हो भने सन् १९५२ अर्थात वि सं २००८ देखि नै नेपाल स्काउटमा बालबालिकाको सहभागितालाई आत्मासाथ गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै विभिन्न टोल समुदायमा बालबालिकाको समुह , पुच ः , मंच आदि रहेको तथा विधालयमा अतिरिक्त कृयाकलापहरू संचालन गर्न सदनहरू बनाउने गरिएको पनि पाइन्छ । यसै गरि सन् १९९० देखि नै विभिन्न राष्टिय अन्तरराष्टिय गै स स हरूको सक्रियतामा बालक्लव, समुह , मंचहरू गठन गरेर देशैभरि बालक्लवको प्रभाव बढ्न थाल्यो ।
बालबालिकालाई समुहको माध्यमबाट संलग्न गराउने प्रचलन केही पुरानै हो । तर पनि बालसहभागिताको अवधारणा अनुरूप उनीहरको विचार धारणा बुझ्ने र सो विचारलाई उचित मान्यता दिने कुराको थालनी संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकार महासन्धीलाई नेपालले अनुमोदन गरे पछाडि बाल आवाजको सुनवाई भएको पाइन्छ ।
यसरी ३ दशकको अवधीलाई स्मरण गरी हेर्दा बालक्लवहरू आफैमा ऐतिहासिक कालक्रम हुन आउदछ । हुन त विभिन्न राजनैतिक दलहरूले बालबालिकालाई बालसैन्य ,सुराकी र कार्यकर्ताको रूपमा सहभागी गराएको इतिहासलाई नर्कान सकिन्न ।
यसै परिप्रेक्षमा वि .सं २०५१ मा स्थापना भएको बाल चेतना समुह र मुलुकमै बालसहभागिताको पक्षमा ओकालत गरिरहेको कन्सोर्टियम नेपाल (२०५६) सम्म आइपुग्दा के कस्ता भिन्नता छन् वा छैनन् ? वा आज स्थापना हुने बालक्लवले के कस्ता कार्यलाई उठान गरिरहेका छन् महत्वपूर्ण सवाल हो । आज हामी नया संरचनामा छौ । देशमा तीन तहको सरकार छ । यती हुदा हुदै पनि बदलिदो परिस्थितीमा बालक्लवको बाटो पहिल्याउन सकिरहेका छैनौ । न कि बालक्लव एउटा प्रोजेक्ट थियो ? हालको दिनमा यसले आफ्नो पहिचान खोज्दैछ ।
अन्त्यमा ः बालक्लव बालबालिकालाई प्रोत्साहित गर्ने र उनीहरूमा अन्तरनिहित प्रतिभा उजागर गर्न पाउन एक साझा चौतारी हो । अत ः यो चुनौतीपूर्ण परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै बालक्लव अघि बढ्नु पर्ने बाध्यता छ । त्यसैले आजैबाट बालक्लवको पुरानो शैली र परम्परा परिमार्जन गर्दै बालक्लवको संस्कारबाट हुर्किएका बालक्लवसदस्यहरूलाई अवसर दिन पछि नपरौ । साथै बालसहभागिताको क्षेत्रमा कृयाशिल संघसंस्थाहरू एकाकार भएर बालक्लब बचाउ अभियानमा लाग्न आवश्यक छ ।
लेखक – लोकेन्द्र शाक्य